Ihlobo yisikhathi sokuhlukahluka, imibala ekhanyayo nokuhlola okufashisayo. Kuyafaneleka ngalesi sikhathi sonyaka hhayi kuphela ukugqoka izingubo ezincane ezikhanyayo, kodwa futhi ukukhombisa izicathulo ezikhululekile nezijabulisayo. Ngokwesiko, izicathulo zasehlobo ziyinto engabalulekile futhi encane, okunikeza lona wesifazane ukukhanya nokuthandeka okungahle kube khona. Okuthandwa kakhulu yizicathulo, i-flip flops, izicathulo, izicathulo ezivulekile nezivulekile, izicathulo ze-ballet ezivela ezintweni zendwangu, izicathulo ze-rubber nezicathulo nezinye izinhlobo eziningi zezicathulo zabesifazane.
Umkhuba walesi sizini ukhululekile, ukukhanya, ama-espadrilles weqiniso, azobukeka emuhle kunoma yimuphi umlenze wesifazane. Bangakwazi ukugqoka kanye nama-jeans, ama-sarafans alula, ama-shorts edlalwayo noma ama-skirts ama-flirty. Lokhu kuyindlela enhle kakhulu yokuhamba ehlobo, izinja ezigqila ezicathulweni ziphefumula, futhi ukungabi nesithende kwenza lolu hlobo lwesicathulo sasehlobo lube lukhulu kakhulu. Ohambweni lwe-espadrilles luzoba yisatellite yakho ebalulekile, futhi imvula ayikwazi ukulimaza ukubukeka kwayo.
Futhi uhlobo oluthandwa kakhulu lwezicathulo ehlobo lika-2013 luzoba yi-espadrilles emgodini - namhlanje zigqokelwe amantombazane amaningi angalandeli imfashini ngendlela efanisayo. Ngokuvamile, noma iziphi izicathulo emgqeni zinhle, zifashini futhi zikhululekile. I-wadding iyona yonke indawo kunesithende, ngakho-ke idonsela abesifazane abaningi abasha. Izicathulo ezinjalo zibukeka zinkulu emlenzeni futhi zihambisana ngaphansi kwesitayela sokugqoka: "kezhual", ezemidlalo noma ezisezingeni eliphezulu. Uma ukhetha izicathulo ezinjalo, udinga ukunaka umbala, impahla, kanye nokuphakama komgqa ngokwawo.
Futhi imfashini kulelihlobo liyizicathulo, izicathulo ezikhethekile, iziqhwaga. Babukeka behle kakhulu emlenzeni, uma ukhetha umbala omhlophe, khona-ke uzogcizelela ngokuphelele i-tan yakho. Izicathulo eziphakeme-amabhuzu nazo zingaba izilwane ezifuywayo ekhabethe labesifazane. Lezi zicathulo zihambisana ngaphansi kokugqoka, iziketi ze-sarafan nge-knee-deep.
Izinwele sezilokhu zihlala futhi zihlala izicathulo ezithandekayo kakhulu. Lapha, ukuma kwe-sock, umbala, ukuphakama kwesithende kanye nezinto ezivela kuzo izicathulo kubalulekile. Bangakwazi ukugqoka ngaphansi kwanoma yikuphi ukugqoka nezicathulo njalo ukuhlanganisa okuphelele emfanekisweni wakho kanye nomhlobiso wezinyawo zomzimba. Ngehlobo lekhethelo elingcono lezicathulo ezivulekile ezenziwe ngezinto zemvelo, ukuze izinyawo zakho ziphefumule futhi ungakhathali.
Ukungafani kwenkathi yokugcina kwakuyizikhumba zasehlobo, kulo nyaka baphinde banqoba abesifazane besimodeli. Lokhu kuyindlela enhle yesithombe kusihlwa, amabhuzu ezinyawo zama-ankle azoba kufanelekile uma ugqoka ingubo noma i-trousers. Ububanzi bombala buhlukile - kusukela kumhlophe omhlophe kanye nemaroni kule nkathi ebomvu. Ukuzikhethela izicathulo ezitolo zethu kuhle, kodwa ukuthengwa kwamanani kuyatholakala ekutholakaleni kwabo.
Izicathulo zizohlale zihlala emfashini, ngoba zingahluka kakhulu hhayi ngombala kuphela, kodwa ngesitayela nangendlela. Abakhiqizi njalo ngonyaka bavela futhi bakhiqize izinhlobo eziningana zezimbadada. Zingaba emgodini noma emhlabathini owodwa, ngesithende esincane noma esigcawini esisodwa. Ungakhetha ukuzikhethela noma yiziphi izinketho.
Ubuhle noma lula?
Izicathulo zasehlobo, yiqiniso, kufanele zibe isibani esincane esihle, ngemuva kwakho konke, uma, uma kungenjalo ehlobo, ungazithokozisa ngemibala ehlukahlukene nemigqa? Kodwa-ke, ungakhohlwa ukuthi ukulula kuyinto ebaluleke kakhulu izicathulo.Uma ufuna imilenze yakho ihambe ngaphandle kokukhathala ezindaweni eziningi ezithakazelisayo, bese ulalela izicathulo ezizobe zikhululekile, okokuqala. ukhathele kakhulu kunanoma yisiphi esinye isikhathi sonyaka - lokhu kuthinteka ngokuqondile ukushisa kwehlobo, kanye nesimo jikelele somzimba.
Qaphela amamodeli akhishwe abakhiqizi abahamba phambili bezicathulo - bazohlale bekwazi ukukujabulisa ngekhwalithi yabo. Amanani ezinjalo izicathulo, Yebo, ngenhla isilinganiso, kodwa ngesicathulo esihle, kuyisihawu ukunika imali. Kodwa imilenze yakho iyobe ibonga kakhulu.
Yimiphi imibala manje eyaziwayo?
Zingaki izinhlobo zezicathulo ezihlukene ezikhona, izimbali eziningi manje zihanjiswe ezitolo nezitolo zezicathulo. Imibala ethandwa kakhulu yenkathi yilezi: i-emerald, i-coral, ibomvu elinomsoco, i-blue blue, beige. Kuyafaneleka njalo ukuthi kukhona abamnyama nabamhlophe. Isidingo esicacile sitholakala ngokuhlanganiswa kwemibala eminingi enemibala - eluhlaza, e-coral, eluhlaza okwesibhakabhaka, emhlophe. Izicathulo ezinjalo zikhona jikelele - zingagqoke izingubo zasehlobo, zombili izitho zomculo eziqhakazile nezokulala.
Imfundo yezemfashini: indlela yokugqoka izingubo ebusika
"Ibhulukwe" elimnandi: umkhuba-2016
Amapaki amahle kunawo wonke asempumalanga ka-2015
Izitayela zefashini zamashumi ayisikhombisa
Imfashini, amamodeli nezitayela zamajackethi 2013
Izimonyo zoLwandle Olufile oluvela kwa-Israyeli
Egg izinwele. Amaphikishi ama-masks nama-shampoos
Apple pie nge ukhilimu ukugcwalisa
Indawo yomlilo kanye nendawo yangaphakathi yekhaya lakho
Ukudla okunempilo, zingaki ukhalori ongadla usuku ngalunye?
Izinhlobo kanye nezindlela zokugqoka imfashini
Lungisa ukuxilonga okuzimele kwentamo
3 "ama-soap operas", okwama-90 ayebuke izwe lonke
Indlela yokudukisa abanye
I-pasta ene-pistachios neminqumo
Ukwelashwa kwe-edema kwezinyawo ngamakhambi abantu
Burdock: izindawo zokuphulukisa utshani
Izingxabano zezingane zasenkulisa
Indlela yokukhetha isisekelo esifanele?